सफल बन्न डिग्री र प्रतिभा होइन, यी १० चिज चाहिन्छ ! Bizshala -
सफल बन्न डिग्री र प्रतिभा होइन, यी १० चिज चाहिन्छ !
यो संसारमा सफल मान्छे बन्नका लागि कति प्रतिशत अथवा कति क्षमता चाहिन्छ ? तपाई सोच्नुहोस त १०, २०, ५० वा १०० प्रतिशत नै । सबैको फरक फरक आँकलन र मापन हुनसक्छ, किनकि हामी सबै फरक छौ, सबैको अलग पहिचान र क्षमता छ ।
पुस्तक पसलमा काम गर्ने माइकल फराडे वैज्ञानिक कसरी बने ? खुट्टाले लेखेर नै झमक घिमिरेले मदन पुरस्कार कसरी जितिन् ? स्कूलको मुख नदेखेका जोन डी रकेफेलर विश्वकै धनी कसरी बने ? भारतको कुनै शहरमा चिया बेच्ने नरेन्द्र मोदी कसरी प्रधानमन्त्री भए ? खलासीको काम गर्दा गर्दै रजनिकान्त सुपरस्टार कसरी बने र एसएलसि पास रेखा थापा कसरी चर्चित नायिका बनिन् ? उदाहरण थुप्रै छन्, यी उदाहरणहरु मान्छे सफल बन्न कति क्षमता अर्थात प्रतिभा चाहिन्छ भन्नेका लागि पनि हो । यी मान्छेहरुमा कुनै पनि फरक चिज थिएन, तर पनि आज उनीहरुलाई सँसारले चिन्छ ।
यसको अर्थ सफलताका लागि केही अरु चिज चाहिन्छ भन्ने हो । मात्र प्रतिभाले हुँदैन, यो लेखमा म केही महत्वपूर्ण कुराहरु राख्दैछु, यहाँ मैले मानिस सफल हुनका लागि शून्य प्रतिभा भए पनि हुन्छ भन्ने बिषयमा म बहस गर्न गइरहेको छु ।
एउटा जुनसुकैै ओहदाको मान्छे पनि समयको ख्याल गरेर आफूले गर्नुपर्ने तथा पुग्नुपर्ने ठाउँमा समयमा जानसक्छ । समयमा जानु, पुग्नु उसको कर्तव्य हो । डाक्टर, इञ्जिनियर, क्लर्क जो पनि आफ्नो समयमा आफूले पुग्नुपर्ने ठाँउमा पुग्छ, त्यही अनुसार उसले आफ्नो यात्रा तय गर्छ । जसका लागि आँखा नभएको दृष्टिविहीनले पनि कोशिश गर्छन भने यसको लागि कुनै प्रतिभाको जरुरी पर्दैन । जसले समयको पालन गर्न जान्दछ, उसले संसारलाई सहजै जित्न सक्छ ।
नैतिकताको बाटोमा चल्नको लागि कति प्रतिभा चाहिन्छ ? कति पनि चाहिदैन, यो सबै तपाई आफैमा भर पर्ने कुरा हो । एक चोटि बुवा आमा, गुरु तथा अभिभावकबाट मान्छेले सिक्छ कि कहिले पनि नराम्रो काम नगर्नु, अन्याय अत्याचार तथा कुकार्यमा नफस्नु । यसको लागि कति कक्षा पढेको हुनुपर्यो र ? यसको लागि कुनै कुनै प्रतिभाको जरुरी पर्दैन । कतै कुनै विश्वविद्यालयको डिग्रिको आवश्यकता हुँदैन । शरीरको रंग कालो, गोरो जुन भए पनि हुन्छ । जसले संकल्प गर्छ–म आफ्नो नैतिकता छाड्दिँन, यसका लागि कुनै प्रतिभाको जरुरी हुँदैन ।
यसका लागि कति प्रतिभा चाहिएला ? एउटा पत्थरलाई मूर्ति बन्नका लागि कति पनि प्रतिभा चाहिन्न, मात्र हम्मर र हतौडाको तागत सहन सक्ने प्रतिभा चाहिन्छ । जस्तै दुधलाई घिउ बन्न कतिको प्रतिभा चाहियो ? मात्र आफूलाई खार्ने प्रयास चाहियो । प्रयासको अगाडि प्रतिभा महत्वपूर्ण होइन। त्यसकारण सफल बन्नुछ भने प्रयासलाई जारी राख्नुपर्छ।
जसले आफ्नो शारिरिक भाषा बोल्छ त्यसको लागि कति पनि प्रतिभाको खाचो पर्दैन, न त कुनै डिग्रि नै चाहिन्छ । सँसारको कुनै ठाउँमा पनि तपाईलाई त्यहाँको भााषाको ज्ञान छैन भने शारिरिक भाषाको माध्यमबाट काम चलाउन सक्नु हुन्छ । आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेजको भरमा भिख माग्ने चार्लि चाप्लिनको बारेमा तपाईले सुनिसक्नु भएको होला, जो आज नामी कलाकार बने अनि औलाले दुनियाँलाई तर्साए । उनी जस्तै अर्को उदाहरण माइकल ज्याक्सन पनि हुन, जसले दुनियाँमा आफ्नो नाम चिनाएर विदा भए।
उर्जाका लागि पनि कति प्रतिभाको आवश्यकता पर्दैन । एउटा आमा, जसले २० केजी वजन उठाउनमा असमर्थ थिइन्, तिनै आमाले मिनिट्रकलाई एक्लै तानेर आफ्नो बच्चालाई कसरी मर्नबाट बचाइन ? उर्जाका लागि कुनै प्रतिभा चाहिदैन, जब मान्छेको भित्रि उर्जा जाग्छ नि त्यो बेला सबै प्रतिभा अनि डिग्री फिका रहन्छ अनि उर्जाले आफ्नो काम देखाईदिन्छ । जब सपनाको उर्जा आगो बर्साउँछ त्यो बेला प्रतिभाको उर्जा पानी भर्छ, आफूभित्रबो उर्जा जगाउनुस सफलता आफै हात पर्छ । राम, कृष्ण, बुद्घ अथवा महाविर बन्न कति प्रतिभाको आवश्यकता थियो र ? मात्र यिनीहरुभित्रको उर्जालाई सही रुपमा रुपान्तरण गरेर आफ्नो ज्ञानले सँसारलाई हाँक्न सफल भए ।
आफ्नो एटिच्युडलाई सकारात्मक राख्न मान्छेलाई कुनै प्रतिभाको जरुरी पर्दैन, न त कुनै औपचारिक शिक्षाको नै आवश्यकता हुन्छ । म यहाँनिर एउटा उदाहरण राख्न चाहान्छु, एक जना राजाको औंला काटिएको देखेर उसको मन्त्रीले राजालाई भने–जे हुन्छ राम्रोकै लागि हुन्छ, तर त्यो कुराले राजालाई चिन्तित बनायो । राजाले मन्त्रीलाई एक झापड हाने र जेल भित्र हाले । उनी शिकार खेल्नका लागि जँगलमा गए । जँगलमा आदिबासिहरुले राजालाई समाते र बलि दिन तयार भए । त्यसैबेला कुनै एकले राजाको एउटा औला नभएको देखेछ । औला नभएकोलाई बलि दिन शुभ नहुने भन्दै राजालाई मुक्ति दिए । राजा भाग्दै दरबारमा आए र जेलमा राखिएको मन्त्रीसँग माफी मागे । मन्त्रीले माफी माग्नुको कारण सोधे । जे पनि हुन्छ, राम्रोको लागि हुन्छ, फेरी राजालाई त्यसको कुरा सुनेर अचम्म लाग्यो अनि सोधे अब के भयो मन्त्री ? भनेर । मन्त्रीले जवाफमा भन्छ–यदि हजूरको औला न कटेको भए म जेलभित्र जाने थिइँन, अनि हजुरसँग सिकार खेल्न जानु पथ्र्यो अनि आदिबासीहरुले तपाईको साटो मलाई बलि दिन्थे । यसैले जहिले पनि सकारात्मक सोचाई अर्थाथ पोजेटिभ एटिच्युडबाट सफलता हासिल गर्न सकिन्छ ।
प्यासन सफलताको कडी हो । जुनसुकै काममा पनि धैर्यता महत्वपूर्ण हुन्छ, सबै कुरा समयसँगै हुँदै जान्छ । धैर्यताले मान्छेलाई सहन र समयमा सही काम गर्न सिकाउँछ । त्यसका लागि थप प्रतिभाको जरुरी हुँदैन ।
८. सिक्ने प्रवृति
सफलता सिकाईमा भर पर्छ । सिकाई प्रक्रियामा कोही पनि मान्छे पूर्ण हुँदैन । , सबैले कुनै न कुनै रुपमा केही न केही सिकिरहेको हुन्छ । सिक्नका लागि कुनै प्रतिभाको जरुरी पर्दैन, मात्र इच्छाशक्ति भए पुग्छ । र, कोशिस गर्नुपर्छ, यदि कोशिस गरियो भने जे पनि काम सिक्न अथवा गर्न सकिन्छ ।
आफुलाई कहिले पनि कमजोर सम्झनु हुँदैन । । आफ्नो बाहेक अतिरिक्त काम गरिराख्नुपर्छ । त्यसो भयो भने सफलता तपाईको पछि पछि आउँछ । जसरी तेन्जिङ्ग नोर्गे शेर्पाले आफ्नो काम बाहेक मान्छेहरुलाई पहाडको टुप्पोसम्म पुर्याउने काम गरे । एकदिन एड्मन हिलारीलाई सगरमाथाको टुप्पोमा पुर्याएर आफ्नो नाम सँसारभर चिनाए । उनीसँग विशेष प्रतिभा के नै थियो र ? तर पनि सफलताको शिखरमा पुग्न सफल भए ।
आफूलाई तयार पार्नका लागि कुनै पनि डिग्रीको आवश्यकता पर्दैन । यदि तपाई आफुलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ भने सँसारको जुनसुकै चिजसँग तपाई भिड्न सक्नुहुन्छ । सफलता तपाईको अगाडि लम्पसार परेर आउँछ ।
माथि उल्लेख १० वटा कुराहरु यदि कुनै मान्छेमा छ भने त्यो जिन्दगीमा कहिल्यै पनि हार्दैन, सफल हुन्छ । यो प्रवृति भएका मान्छेलाई प्रकृतिले भनेको छ–तिमी प्रतिभामुक्त छौ, र संसारको जुनसुकै कठिन काम तिमी गर्न सक्छौ ।
तपाई पनि प्रयास गर्नुहोस, सफलता टाढा छैन । जसरी अँग्रेजीमा एउटा उखान छ नि ‘हार्ड वर्क विथ ट्यालेन्ट ह्वेन ट्यालेन्ट डजन्ट वर्क हार्ड ।’
(लेखक दुबईमा कार्यरत नेपाली इञ्जिनियर हुन्।)
afjal hussain tips
सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोगलाई अनिवार्य गरिँदै
आर्थिक अवस्था सबल पार्न चाहनुहुन्छ, यी बानी त्याग्नुहोस्
काठमाण्डौ । अत्याधिक खर्च र विना आवश्यकता ऋण लिनुजस्ता व्यवहारबाट...
दृष्टिविहीनका लागि आयो ‘स्मार्ट लठ्ठी’, अब बोलेरै पुर्याउँछ
काठमाण्डौ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विभिन्न खोज,...
बरफमाथि लग्जरी होटेल, कस्तो होला बास ?
काठमाण्डौ । छुट्टीको समयमा उच्च पहाडी क्षेत्र, मनोरम ताल अनि...
अब लामखुट्टेले नै गर्नेछ डेंगु नियन्त्रण, वैज्ञानिक
काठमाण्डौ । नेपाललगायत दक्षिणपूर्व एसियाली देशहरुमा यो वर्ष...